နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့် နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင် H.E. Mr. Didier Burkhalter အားလက်ခံတွေ့ဆုံ ~ Myanmar Forward
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့် နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင် H.E. Mr. Didier Burkhalter အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
Posted by drmyochit Saturday, November 03, 2012, under သတင်းများ | No comments
နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၂
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည် ဆွစ်ဇာလန် နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့် နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင် H.E. Mr. Didier Burkhalter အား ယနေ့ ညနေ(၃)နာရီတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော် သံတမန်ဆောင်ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံရာတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့်အတူ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်၊ သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်းနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများ တက်ရောက်ကြပြီး ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့် နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Christoph Burgener လည်း တက်ရောက်သည်။
တွေ့ဆုံရာ၌ နှစ်နိုင်ငံရင်းနှီးသော ဆက်ဆံမှုများ တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ရေး၊ စားသောက်ကုန်နှင့် သဘာဝထွက်ကုန်များအား တန်ဖိုးမြှင့်တင်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေး၊ ပြန်လည် ထူထောင်ရေး နှင့် လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားမှုဆိုင်ရာတို့တွင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး၊ သဘာဝဘေးဒဏ်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိရေး၊ ကျန်းမာရေး၊စားနပ်ရိက္ခာနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးနှင့် ကဏ္ဍစုံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ကိစ္စရပ်တို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ ဆွေးနွေးကြသည်။
၈၈ မျိုးဆက် မင်းကိုနိုင် ဘာနဲ့ထမင်းစားလဲ?
ဗြိတိသျှ တော်ဝင်ရေတပ်၏ လေယာဉ်အခြေစိုက် စခန်း အဆိပ်...
အတွေးခက် အရေးခက်စေသော ရခိုင်လူမျိုးတို့၏ ဘ၀(ပေးစာ ...
ရန်ကုန်မြို့တွင် ဒီမိုကရေစီဆန်ဆန် အုပ်စုဖွဲ့ဝိုင်း...
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ နိုင်...
နေမျိုးဇင်၊ ဒ်ါခင်ကြည်၊ ဦးဝင်းတင်၊ ရဲတိုက် ဖောင်ဒေး...
KIO ကဖမ်းပြီး ABSDF(၈၈)ကျောင်းသားသတ်မတော်(မြောက်ပိ...
ကေအိုင်အေ လက်အောက်ငယ်သားတွေရဲ့ ခံစားချက်ရင်ဖွင့်သံ...
အမေရိကန် သံအမတ်ကြီးနှင့် အဖွဲ့ ရမ်းဗြဲရောက်စဉ်မှာ ...
KIA အဖွဲ့မှခြိမ်းခြောက် ဆက်ကြေးကောက်
KIA အဖွဲ့မှ ရိက္ခာပြတ်လပ်နေသဖြင့် ဆက်ကြေးများ အဆက်မ...
မြန်မာ- ဘင်္ဂလာ နယ်စပ် ပင်လယ်ပြင် နှစ်ဘက်နိုင်ငံ ရေ...
သပြေကုန်းရွာမှ NLD ပါတီဝင်များ ထင်ရာစိုင်း လုပ်ဆော...
Radio Karen: IKO Says To Keep1949 Mindset for Karen Nationalism. -